Breaking News: प्रभुदेवाले आफ्नै भान्जी सङ्ग बिहे गर्दै ! – AB Sansar
Breaking News: प्रभुदेवाले आफ्नै भान्जी सङ्ग बिहे गर्दै !
November 13, 2020 adminLeaveaComment on Breaking News: प्रभुदेवाले आफ्नै भान्जी सङ्ग बिहे गर्दै !
एजेन्सी । निर्देशक, अभिनेता तथा कोरियोग्राफर प्रभु देवालाई अदभूद डान्सरको रुपमा चिनिन्छ । एक ग्रुप डान्सरको रुपमा आफ्नो करियर सुरु गरेका प्रभु देवा आज दक्षिण भारतीय फिल्ममा मात्रै नभई बलिउडका शीर्ष कोरियाग्राफर र निर्देशकको रुपमा पनि परिचित छन् । उनै प्रभु देवाले दोस्रो विवाह गर्न लागेका छन् । *****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
प्रभु देवाले सन् २०११ मा श्रीमती रामलतासँग सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए । प्रभु देवा र रामलताका तीन छोरा छन् । प्रभुको सम्बन्धविच्छेद हुनुअघि उनको नाम दक्षिण भारतीय फिल्मकी सफल नायिका नयनतारासँग पनि जोडिएको थियो ।*****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
WHO भन्छ : अब सकियो कोरोनाको ड’र कोरोना को खोप परीक्षण सफल, १ अर्ब ३० करोड डोज उत्पादन गरिने !
३ वर्षसम्म नजरबन्दमा परेकी पत्नी र छोरासँग भेट्दा..